ALAHADY 28 MARS 2004
Accueil Ny Mpitandrina Perikopa ALAHADY 28 MARS 2004
Publication : 30 mars 2004
Perikopa : Isaia 43 :15 - 21 ; Fil 3 : 1 - 14 ; Jaona 8 : 1 - 11
" Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany"(Jaona 8:7) hoy Jesoa tamin’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo izay nitondra teo Aminy vehivavy anankiray azony nijangajanga.
Rehefa fakafakaina tsara ny valin-tenin’ny Tompo , dia :
mamaky bantsilana ny hevitra sy teti-dratsy kotrehin’ireto mpiapanga ireto.
mandetika ao amin’ny fieritreretany ny maha-mpanota koa azy ireo,
mamela ny lalàn’i Mosesy ho tsy voakitikitika,
manakiana ny fomba fitsarana ,
Manome toerana ny fangorahana sy ny famindram-pon’Andriamanitra ho an’ny olona mila famonjena.
Nefa koa tsy manamaivana velively ny heloka amam-pahadisoana na ny fahotana. Ampahafantarin’Andriamanitra amin’ny alalan’io tenin’i Jesoa io ny olombelona rehetra fa tsy misy amin’izy irieo na dia anankiray aza manana ny fahamasinana sy ny fahamarinana , satria efa samy nanota teo imason’Andriamanitra sy efa nania tahaka ny ondry very avokoa. Koa noho izany tsy manana zo na fahefana hitsara na hanameloka ny hafa. Fa na dia Jesoa aza tsy mba nanameloka fa niantso ny mpanota hibebaka , nitady sy namonjy ny very !
Ny lalàn’i Mosesy dia milaza fa ny lehilahy mijangajanga na mandry amim-behivavy vadin’olona , dia voaheloka ho faty miaraka amin’ilay vehivavy nandriany (Levitikosy 20:10 ; Déotoronomia 22:22). Raha izany dia manao fitsarana mitanila ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo. Tsy mahita olo-meloka afa-tsy ravehivavy ihany izy irieo ; ny fahadisoan’izay niara-nijangajanga tamin’ity vehivavy ity dia toa tsy hita mihitsy. Ny fijangajangana anefa dia tsy vitan’olona iray fa tsy maintsy niarahan’olon-droa nanao.
Ny zava-kendren’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo dia ny ampiditra am-bovo ny Tompo , ahitany fomba na fihetsika entina anamelohana Azy eo anatrehan’ny fanjakana romana. Fa Jesoa Izay Andriamanitra mahay mahafantatra ny ao anatin’ny fo sy ny saina ao , dia tsy voatarika tamin’izany fandrika izany : fahanginana no nasehony ireo mpanotany Azy , avy eo Izy vao niteny hoe : "Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany". Ny hafatra tian’ny Tompo ho raisintsika amin’izany dia aoka ho mari-pototra ny fiapangana sy ny fitsarana atao amin’ny hafa. Tsy misy tamin’ireo mpanora-dalàna tsy nanota , nefa mikiry biby hitsara sy maika hanameloka ihany no masaka ao anaty ati-dohany.
Impiry impiry moa isika no sahy avy hatrany mitora-bato ny rahalahy , na ny anabavy , na ny rahavavintsika , na ao amin’ny finoana izany , na eo amin’ny fiaraha-monina amin’ny ankapobeny ? Io fitoraham-bato ataotsika io dia miseho amin’ny endriky ny fanaratsiana , fosafosa , fanendrikendrehana , fanaovana vavolombelona mandainga hanameloka ny hafa , fimenomenomana , fitakoritsiahana , fialonana. Ratsy dia ratsy tokoa ny vokatrin’ireo toetra ireo satria mamono mahafaty ny maha-izy azy ilay olona toraham-bato ; eo amin’ny lafin’ny fiainana ara-pinoana dia mahatonga ny olona hihemotra na handao tanteraka ny fiaraha-mivavaka , na mifindra monina mihitsy.
Noho izany mila manao jery kiana ny tenantsika isika , fa sao isika no mendrika ho toraham-bato. Eo anatrehan’ny tenin’Andriamanitra dia zava-poana ny fahefana sy ny fahalalana ary ny fahendren’olombelona ,toy izay hita sy ananan’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo. Izany indrindra no hanafaran’ny Apostoly Paoly antsika ao amin’ny taratasy nosoratany ho an’ny Filipiana (3:1-14). Nananany avokoa ny toetra rehetra andrasana amin’ny mpitarika na mpiandraikitra teo amin’ny fivavahana jiosy. Nanenjika loatra ny Fiangonan’Andriamanitra sy ny mpanompon’i Jesoa Kristy izy. Nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin’ny fandringanana ny kristiana ; satria nihevitra izy fa ahitany tombony teo anatrehan’Andriamanitra ny fanarahana amin’ny fomba hentitra ny lalàn’i Mosesy. Kinanjo rehefa tena nofohazin’i Jesoa Kristy Tompo tamin’ny torimasom-panahiny sy ny fahajambana ara-panahiny Paoly vao nahatsiaro saina fa hay taimboraka avokoa izay nataony. Tonga olom-baovao sy nateraka indray tao amin’i Jesoa Kristy izy. Faty antoka ho azy ny nanenjika ny olon’Andriamanitra hatramin’izay ela izay ; fa ankehitriny kosa dia efa olom-baovao izy ka tsy misy heveriny ho tombony, tsy misy na inona na inona afa-tsy Jesoa Kristy voahombo teo amin’ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin’ny maty ho famonjena azy no ataony ho rehareha sy zava-dehibe eo amin’ny fiainany.